XOG: DF Soomaaliya oo qorsheynaysa in ay is hor istaag ku sameyso Xassan Sheekh & Shariif Sh oo ku sii jeeda Kismaayo, Maxaase ka dhalanaya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa wararku sheegayaan in ay qorsheynayso in ay is hor istaag ku sameyso wafuud ay hogaaminayaan Madaxdii hore ee dawladda Faderaalka oo kusii jeeda saaka magaalada Kismaayo, halkaas oo ay kaga qeybgalayaan Caleema-Saarka Axmed Madoobe.
Xogta aan helnay ayaa sheegaya in ciidamo la dhigay jidadka muhiimka ah ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, sidaas oo kalena qeybta VIP-da lagu wargaliyey in aan cidna ka dhoofi karin aan fasax ka haysan dawladda Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in ay talaabadan ka dhigan tahay mid xasaasi ah oo hadii ay isku dayaan madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya ay halis weyn ka dhalanayso, waxaana wararku sheegayaan in ay hadda socdaan dadaalo isku dhac looga hortagayo.
Kulan gaar ah oo ay xalay yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo Wasiirkiisa koowaad ayaa la xaqiijiyey in ay uga wada hadleen arrimaha ku saabsan socdaalada magaalada Kismaayo, xili ay shalay soo baxeen wararka sheegaya in la furay duulimaadka Hawada.
Kismaayo, waxaa 3 saac ka dib ka dagaya wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo wariyayaasha kula hadli doona, kana hadlaya xaaladaha taagan.